Dabbaal dagga Oromada 150 sano kaddib ay ku qabsatay Addis Ababa | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dabbaal dagga Oromada 150 sano kaddib ay ku qabsatay Addis Ababa
Dabbaal dagga Oromada 150 sano kaddib ay ku qabsatay Addis Ababa
Muddo ka badan qarni waxaa marki ugu horreysay caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa lagu qabtay xuska dabbaal dagga sanadlaha ee Irrecha oo ay qowmiyadda Oromada ee ugu badan dalka Itoobiya ay leedahay.
Xuska Irrecha oo ay qowmiyadda Oromadu leedahay waxaa loo dabaal dagaa curashada sanadka cusub iyada oo munaasabado kala duduwan munaasabaddaasi lagu soo bandhigo.
Ammaanka magaalada oo aadka loo adkeeyey waxaa waddooyinka magaalada isugu soo baxay boqollaal kun oo shacab ah oo dabbaaldagaasi ka qayb galaya, waxayna isugu yimaaddeen fagaaraha ugu weyn magaalada Addis Ababa ee Meskel oo xuskaasi qaybtiisa ugu weyn u ka dhacayey dadkuna waxay ruxayeen calan iyo ubax.
Maamulka magaaladu waxay sheegeen iney rajeeynayaan iney xuskaasi ka qaybgaleen 10 million oo qof ayna dhici karto tirada iney intaasi ka badato.
Hadda ka hor xuskan waxaa lagu qaban jiray magaalada Bishoftu oo caasimadda Addis Ababa u jirto 40 km (25 mile) munaasabado noocan ahna waxay ka dhacayaan deegaannada ay qowmiyaddaasi degto oo dhan.
Qowmiyadda Oromada oo ku hareereysan magaalada Addis Ababa asal ahaanna dhulka ay magaalada ku fadhido iska leh ayaa bariyahan dambe isbalaarin ka wadday siyaasadda, dhaqanka iyo arrimaha bulshada ee magaalada.
Wariyaha BBC Qaalkidaan Yibeltal waxay sheegtay xuskan in magaalada Addis Ababa lagu qabto ay astaan u tahay mid ay qowmiyadda ugu diyaar garoobeyso doorashada guud ee lagu wado iney dalkaasi ka qabsoonto sanadka soo socda.
Qowmiyadda Oromada oo tira ahaan lagu qayaaso 40 malyan ayaa la sheegaa iney Itoobiya ku nool yihiin taasoo ka dhigeyso in kabadan 30% shacabka dalkaasi.
Dadka munaasabaddaasi ka qayb galayana waxay ku soo labbisteen dharka hiddaha iyo dhaqanka u ah qowmiyaddaasi sida qofkan sawirka ka muuqdo oo ka soo jeeda gobolka Shawa. Dharka ay gabdhahan ku labbisan yihiinna badanaa waxaa xirata beesha Booranta oo qowmiyadda Oromada ka mid ah. Ninkan wuxuu ka yimid gobolka Baali oo Addis Ababa u jirta 400 oo Km si uu munaasabaddan uu uga qayb galo. Gabadhan dharka ay ku labbisan tahayna waxaa laga xirtaa bariga dalkaasi Itoobiya oo ay qowmiyaddaasi degto. Qowmiyadda Alaba oo ka tirsan qomiyadaha ku bahoobay shucuubta Koonfureed ayaa ka mid ah qowmiyadaha kale ee munaasabaddaasi ka soo qayb galay.
Ra’isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa isbeddello dhowr ah ka sameeyey dalkaasi tani iyo marki uu xilka qabtay, iyada oo munaasabadda Irrecha ay ku soo beegantay xilli ay xiisadda siyaasadeed iyo isku dhacyada beelaha dalkaasi ay aad u sarreyso sida uu sheegay wariyaha BBC uga so warranta Addis Ababa.
Sawirradan waxaa qaaday: Yadeta Berhanu (BBC ka tirsan), Amensisa Negera (BBC ka tirsan) iyo wakaaladaha Reuters and AFP.
Previous articleJubbaland Oo Soo Iibsatay Diyaarad Lagu Dhabar Jabinayo Xayiraadda Dawlada Moqdisho
Next articleGudoomiyaha baarlamaanka Masar oo isbarbar-dhigay Hitler iyo madaxweyne Sisi